१५ असारलाई धान दिवसका रुपमा मनाउने क्रममा देशका विभिन्न स्थानमा भएका सार्वजनिक कार्यक्रमका केही झलकहरू ।
हेर्नुस् १५ तस्वीरमा १५ असार:
सत्रौँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवका अवसरमा सोमबार उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–१३, बेहर्डवाको ९६ बिघा चाक्लाबन्दी जमिनमा धान रोप्दै रोपार । तस्वीरः हरिकुमार राई, रासस
धनगढी उपमहानगरपालिका–१३ स्थित कैलाली गाउँको खेतमा धान रोप्दै स्थानिय कृषक । यहाँका अधिकांश किसानहरु हिजोआज रोपाई गर्नमा निकै व्यस्त रहेको पाईन्छ । तस्वीर: तिलकराज ओझा, रासस
गोरु जोत्दै हली बाउसे
ओखलढुंगाको मोलुङखोलाको किनारमा खेत जोत्दै किसान। तस्वीर: मनोज खतिवडाको फेसबुक।
मेशिनको सहायताले धान रोपिँदै । तस्वीर: रत्न श्रेष्ठ, रासस
सत्रौं राष्ट्रिय धान दिवसका अवसरमा सोमबार तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका–२ जामुनेस्थित खेतमा धान रोप्दै किसान । जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा रोपाइँ शुरु भएको छ भने केही ठाउँमा चैते धान थन्क्याएपछि मात्र धान रोप्ने तयारीमा कृषक छन् । तस्वीर: कृष्ण न्यौपाने, रासस
तनहुँको व्यास नगरपालिका–५ साँगेका महिला रोपाइँ गर्नका लागि व्याडबाट धानको बीउ निकाल्दै । असार शुरु भएसँगै जिल्लाका कृषकलाई धान रोपाइँको चटारो छ । तस्वीर: कृष्ण न्यौपाने, रासस
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–२ का महिला धान रोप्न बीउ काढ्दै । समयमै बर्षा हुँदा धान रोपाइँ कार्य कञ्चनपुरमा ५३ प्रतिशतभन्दा बढी सकिएको छ । तस्वीर: राजेन्द्रप्रसाद पनेरु, रासस
रोपाइँका लागि ट्र्याक्टरको सहायताले माटो सम्याउँदै । तस्वीर: रत्न श्रेष्ठ, रासस
धान दिवसमा खुमलटार
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् बाली विज्ञान महाशाखा खुमलटारमा सोमबार रोपाइँ गरी सत्रौं राष्ट्रिय धान दिवस मनाइयो । फार्म परिसरमा रोपाइँका लागि राखिएको धानको बीउ । तस्वीर: रत्न श्रेष्ठ, रासस
आधुनिक मेसिनबाट धान रोपिँदै
सत्रौँ राष्ट्रिय धान दिवसका अवसरमा आठ लेनको आधुनिक मेसिनबाट धान रोप्दै कृषि औजार अनुसन्धान केन्द्र पर्साका कर्मचारी । सो मेसिनले एक घण्टामा १० कठ्ठा रोप्ने र एक लिटर मात्रै डिजल खपत हुने केन्द्रका प्रमुख वरिष्ठ वैज्ञानिक सचिनकुमार मिश्र बताउँछन् । । तस्वीर: सफल खतिवडा, रासस
कोदालीबाट खेत सम्याउँदै किसान । तस्वीर: रत्न श्रेष्ठ, रासस
०७. धान रोप्न व्यस्त रोपार । धान रोप्ने रोपारलाई रु. ५१७ रुपैयाँ ज्याला दिइएको छ । तस्वीर: रत्न श्रेष्ठ, रासस
राष्ट्रिय धान दिवसमा वामदेव
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतम १७ औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवका अवसरमा सोमबार ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित आफ्नो निवास नजिकै खेतमा धान रोप्न हातमा बीउ लिँदै । साथमा उहाँकी धर्मपत्नी तुलसा थापालगायत । तस्वीर: उपाध्यक्ष गौतमको निजी सचिवालय, रासस
धानको बीउ काढ्दै कृषक । तस्वीर: रत्न श्रेष्ठ, रासस
धान रोप्दै जनप्रतिनिधि
सत्रौँ राष्ट्रिय धान दिवसका दिन सोमबार रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा स्थानीय किसान रोपाइँमा व्यस्त । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु पनि उहाँहरुलाई साथ दिन पुगेका छन् । तस्वीर सौजन्यः विपी गौतम, रासस